Masks ebusweni beqanda elimhlophe
Amaqanda enkukhu ayiluncedo ngokuqinisekileyo, kwaye ngokuphindaphindiweyo baye bafakazela le nyaniso kwi-cosmetology. Njengoko kuyaziwa, amaqanda enkukhu aqukethe iqanda elimhlophe, elityebile nge-vitamin B, elenza lukhuni kwaye lulole isikhumba. Ukunyamekela i-oily kunye nenhlanganisela ye-skin beauticians isincoma ukuba i-masks ibhekene ne-white white.
I-white white ayinakunakunyuswa kwi-sikhumba esinamafutha kunye nelikhuni, liyakuthintela. Ukumisa isikhumba kunye nemibhobho ephosakeleyo kwamehlo kwaye ebusweni kusetyenziswa iiprotheni masks.
I-mask ye-egg ingasetyenziselwa ebusweni bonke, kunye nakwiindawo ezinengxaki ikakhulu (ebunzini, ehlathini). Lungiselela imaski inokuvela kuphela kumhlophe omnye weqanda. Iprotheni kufuneka ibe yinyame. Ukwenza oku, thatha inkukhu yenkukhu, ungene kwigobolondo uze ususe ngokucophelela iprotheni ephuma kwi-yolk. Ukuba ufuna, unako ukwandisa inani lamaqanda, kodwa ungalibali malunga namanye amacandelo emaski. Kwakhona kufuneka bakhuliswe ngokulinganayo.
Iireyiki zokupheka isiskto sombuso esenziwe ngokwenza ngokusekelwe kwiprotheni.
Iiprotheni imaski yesikhumba seoli.
Le ndlela yindlela elula yokulungiselela isiskiti seprotein - nje ngeproteinyini ehlanjulweyo. Ukuze usebenzise, ​​udinga i-brush kunye nepotton pad. Faka isicelo sesitye esincinci se-mask esikhumbeni uze ushiye ukuba usome ukuze wenze i-crust. Ngokuqhelekileyo oku kwenzeka kwi-5-7 imizuzu. Phinda inkqubo kathathu. Awudingi ukucima iingqimba zangaphambili zemaski. Emva kwemizuzu engama-20, hlamba imaski ngamanzi apholileyo. Ukuze uhlambulule, uhlalutye kwaye unciphise umxholo weoli, ulutye lusetyenziswa yikhosi, kungekho kabini ngeveki, kwimiqathango ye-8-15.
Iiprotheni i-mask kunye nohlobo olukhuni lwesikhumba kunye nama-pores awandisiweyo.
Kwiprotheni ephosiweyo, kufuneka udibanise ithispoon yelisi yamanzi (esitsha). Inqubo yonke iphindaphindiwe ngendlela efanayo nale recipe. Kwakhona kuyimfuneko ukuhlamba imaski emva kwemizuzu engama-20. Le maski ayisebenzisi nje kuphela ekunciphiseni amacwecwe nokuhlambulula ubuso, kodwa kwakhona xa kuvela imibimbi yokuqala.
Ama-Masks ezenziwe ngeprotheni ebonakalayo emhlophe ngenxa yesikhumba esinamafutha kunye neengxaki.
Kule maski, sidinga i-white white, enye ioli efunekayo ukukhetha kuyo: ioli yomjunipha, ipayini, umthi wetiyi, i-lemon okanye i-rosemary, kwaye siya kuyidinga i-hydrogen peroxide. Emva kokubetha iqanda elimhlophe, wongeza i-drops 15 yesisombululo se-10% ye-hydrogen peroxide, kwaye emva koko ama-2-3 amathole eoli efunekayo. Imaski kufuneka isetyenziswe ebusweni obunzima (ngokungafani neendlela zokupheka zangaphambili), kwanokubeka. Kufuneka kubekho uluhlu olunye. Ukongezelela, njengokuba kwindlela zokupheka zangaphambili, sihlamba i-mask ngamanzi apholileyo emva kwemizuzu engama-20.
Sinikeza enye iresiphi yemaski ephosa. Ukulungiselela imveliso oyifunayo 1 tbsp. l. iicube ezityhafile (i-dill, sorrel okanye i-parsley) ukudibanisa kunye neproteinyini enehlumelo. Imifuno ingahlanganiswa phakathi kwabo. Impembelelo epheleleyo yenza umxube we-parsley ne-sorrel. Emva koko, ukuxuba okuluhlaza kunye neeprotheni, sebenzisa umgca olinganayo ebusweni. Emva koko sukuma ngamanzi abandayo emva kwemizuzu eyi-15. Ukuba unamaqabunga, amabala e-pigment okanye ubomvu obunzima, ke le maski ayinakukuxhomekeka kuyo.
I-masitam mask yefayili kunye nohlobo lwesikhumba oludibeneyo.
Ukuze ulungiselele le maski, udinga inyama kunye nejusi yamajikijolo, kwaye, ngokuqinisekileyo, iqanda elimhlophe. Okukhethiweyo kunikwa amajikijolo e-currants obomvu, ama-strawberries, ama-strawberries kunye nama-raspberries ehlathi. Hlanganisa izixhobo ukusuka ekubalweni kwe-2 tbsp. l. inyama yeejikijolo kwiproteinyini yenkukhu e-1. Gxininisa izithako ngokugqibeleleyo. Faka isicelo semaski kwizigaba ezintathu, yonke imizuzu emi-5-7. I-mask iyahlanjwa njengesiqhelo-ngamanzi apholileyo emva kwemizuzu eyi-15.
Ubuncwane obuthathakayo odidi lwesikhumba seoli.
Ukulungiselela le maski, udinga i-apple enye eluhlaza, emele ihlambuluke imbewu kunye ne-peel. Emva koko, ugalelwe i-apple ye-grater exutywe kunye neprotheyini enehlumelo, kwaye ungeze kumxube 1 tsp. yeoli yeoli. Faka isicelo se-mask ngokusemgangathweni ngobuso uze ususe ngamanzi apholileyo emva kwemizuzu eyi-15.
Ubuso obuthathakayo odidiyelwe uhlobo lwesikhumba.
Le maski iya kufuna 1 tsp. ioli yeoli, i-white whites kunye ne-1 tbsp. l. yobusi bendalo. Ezi zixhobo ziyakwazi ukubonelela ulusu ngesondlo esilungileyo, kwaye ubusi bendalo bunceda ukuphilisa ii-microarrays kunye nokutshatyalaliswa kwesikhumba. Zonke ezi zithako zixutywe ngokupheleleyo. Emva koko kufuneka ungeze 2 tbsp. l. oatmeal. Isalathisi esisondlo sisetyenziswe ngokufanayo kunye nokuhlanjululwa ngamanzi emva kwemizuzu eyi-15.
Ukusebenzisa i-protein mask rhoqo, uya kuhlala uselula kwaye unomdla!
Iingcebiso zobungcali bezakhono zobungcali: i-lip makeup
Inkqubo yokuhamba yokunakekelwa komzimba
Iintlama ezikhuphayo: indlela yokulahleka ubunzima ebusweni
Indlela yokwenza ubuhlungu buso kunye nentamo ekhaya?
Ngokumalunga nokudala ukumamatheka okuhle kunye okuvisisanayo
Ukuguquguquka kwemizwelo kumntwana: icebiso kubazali
Ukugxininisa ngokugxininisa kwimva yentloko-yindlela-2016
Ziyintoni ukusuleleka kwe-nail fungal?
Ingakanani umntu onokuyenza ngaphandle kwesondo
Ukukhawuleza ukuthatha isityebi ngokunyanisekileyo?
Iingxowa zezonka ngeerberberries
Ubisi lwe-alimondi olumenziweyo
Ungaqala njani ukwenza imali kwaye uqalise ishishini lakho
Inyanga yesithoba enobomi bomntwana
Impilo: izifo zolwimi
Indlela yokuziphatha nentombazana, ukuba insizwa iphakamisa isandla sayo?
Indlela yokubala umjikelezo wenyanga
Indlela yokwelula izicathulo ekhaya
Iindlela zokulungiselela itiye zibanzi kwaye zininzi
Isiqhamo se-papaya: izakhiwo ezincedo
Intlanganiso yeendwendwe ngokukhawuleza